Download video by url dibna loogu badalo in ay MP3
> Resource > Video > Sida loo rogo ama URL in MP3
Marka aad Author hoorto websites video, waxaad ka heli kartaa videos music badan soo bandhigay. Iyadoo ku riyaaqayaa online daawashada iyaga, mararka qaar waxaad kaliya laga yaabaa in ay qaataan music si ay u dhagaystaan ​​on go ah. Marka waxaad ayaa rajeynaya in ay helaan hab fudud si loogu badalo url video ay u mp3. Ma jiraa hab noocan oo kale ah? Haa, waxaad ka heli kartaa halkan-ka Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ). Barnaamijkan taageeri karaan URLs diinta ka qaatay dhammaan websites video caanka ah sida YouTube, VEVO, Hulu iwm Waxaad si fudud u bedeli karaan url in mp3 la qasabno yar.
Download barnaamijka iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Ka dib markii la rakibey, fadlan la furo si ay u baro ay interface. Barnaamijka wuxuu leeyahay laba nooc oo waa in aad doorato mid ka mid ah sida ay your computer. Waxaan doonaa qaadan version daaqadaha tusaale ah oo muujinaya faahfaahinta diinta url in mp3.
1 Raadi URLs video
Daah-daalacashada taageeray barnaamijka kuwaas oo IE, Firefox iyo Chrome. Oo waxaad tagtaa goobta video aad rabto, tusaale ahaan YouTube.com ah. Ama waxaad straightly furan kartaa YouTube.com by khaanada ay url in bar cinwaanka ka dib markii gujinaya ah tab Online Video barnaamijka. Markaas ka heli video ah leh music aad rabto.
2 Download url in mp3
Xaq-riix video ama kaliya halkan soo galana cinwaanka aad nuqulka ay url, markaas paste button URL guji barnaamijka. Markaas barnaamijka kaliya ku bilaaban doono video ah.
Haddii aad u furo video uu ugu ciyaari karo, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa video ah adigoo gujinaya ka yeelay Dhalanteed la button Download Midigta sare.
3 Beddelaan url in mp3
Marka video ka baxayo duuban, waxaad ka heli kartaa maktabadda soo bixi. Eeg dhow item video maktabadda, waxaad arki doontaa macluumaad aasaasi ah sida qaabka iyo xajmiga iyo waxa kale oo aad dareemi doonto button badalo on xaq ah. Tani waa waxa aan u baahan tahay. Riix badhanka badalo iyo dooran Qaabka> Audio> MP3. Riix OK iyo geeddi-socodka wuu soo celiyaa bilaabo. Raadi mp3 faylka la gediyay maktabadda jeesan oo xaq-riix faylka si fur galka jeesan oo markaas wareejiyo qalabka la qaadi karo si aad gacanta. Markaas waxaad ku dhegeysan kartaa miyuusigga ka Socda.
Fiiro gaar ah: Waxaad kala soo bixi kartaa oo aanay u url galay mp3 waqti isku mid ah. Hubi Download markaas Beddelaan Midigta sare ee interface dajinta barnaamijka. Waxaa Riix dooro qaabka> Audio> MP3 format sida wax soo saarka.
Tip dheeraad ah: Wondershare TidyMyMusic u Mac kaa caawin kartaa helida macluumaadka oo dhan files MP3, kuwaas oo, inkasta oo, waa la helay ay ka baxaan diinta. Macluumaadka waxaa ka mid ah artist, horyaalka, farshaxanka iyo lyrics album. Waxa kale oo ay kaa caawin karaan nadiifinta maktabadda music aad sida Lugood.
Download barnaamijkan u leedahay in isku day ah oo aad u sii socotay inay u jeclahay.